Iindlela ezili-14 zokunyusa ingeniso kwiSiza sakho se-Ecommerce | Martech Zone
Ngale ntsasa sabelane ngeendlela ezisi-7 zoku ukonyusa inkcitho yabathengi kwindawo okuyo. Kukho iindlela obufanele ukuba uzibeke kwindawo yakho ye-ecommerce ngokunjalo! UDan Wang wabelane ngenqaku ngezenzo onokuthi uzenze yonyusa ixabiso leenqwelo zakho zokuthenga kwaShopify kwaye I-ReferralCandy ibonakalisile ezo zenzo kule infographic.
Phucula uyilo lwakho lwevenkile ngokuqokelela ingxelo kunye nokuvavanya utshintsho kumxholo.
Yenza iSibonelelo sokuPhuma ukweyisela iindwendwe ekuguqukeni ngaphambi kokuba zihambe.
Sebenzisa i-imeyile ngobulumko ukuqhuba ukugcwala kwivenkile yakho kwaye uvelise ukuthengisa okungcono kunosasazo lwasekuhlaleni.
Gcina unxibelelwano rhoqo Ngokuthumela iincwadana rhoqo ngeentengiso kunye nezaphulelo.
Nokwandisa ukuSebenzisa imali ngovavanyo kunye nokwahluka kwamagama aphambili ukujolisa ngcono kwimikhankaso yakho.
Sebenzisa ubungqina boLuntu Ngokucela nokugcina uphononongo olukhulu kunye nokuhlelwa kwiimveliso zakho.
Lindela ukuThengisa kwixa elizayo ngokubandakanya izinto njengeziphelile kwisitokhwe ukulinganisa inzala.
Iimveliso ezithengisa phezulu ngokubonisa iimveliso ezinxulumene nazo ezikuluhlu lwamaxabiso afanayo.
Ukunciphisa ukuLahla inqwelo ngokusebenzisa i-imeyile kunye neenkqubo zokubuyisela ukubhengezwa kweendwendwe ukuba zibuyele kwinqwelo yazo.
Izikhumbuzo zoLudwe ziingcebiso ze-imeyile eziqhuba umntu ukuba athenge. Yongeza ukuthengisa okanye uthengise ulwazi ukwandisa umdla.
Bandakanya iCandelo leZipho iimveliso ezizodwa. Ngokwesiqhelo bonyusa imida yenzuzo!
Yazisa iVenkile kaFacebook ukuthengisa ngokuthe ngqo kubasebenzisi be-Facebook kunye nokufumana ukubanzi ngokubanzi ngemidiya yoluntu.
Zibandakanya ne-Instagram Ngokubaleka kukhuphiswano, ukubonisa emva kwezigcawu, kunye nokwabelana ngeefoto zabathengi kunye neemveliso zakho.
Ukukhuthaza iLizwi-loMlomo ngokufumana kunye nokuvuza abachaphazeli abanokufikelela kubaphulaphuli ojolise kubo.
Ngeendaba zamva nje ze Apple Pay, Ndingadibanisa ukudityaniswa kweendlela ezivumela ukukhangela ngokulula, ukuthenga kunye nokuthenga ngeselula kunokuba sesinye sezona ndlela zibalulekileyo zokuqhuba ukuthengisa ngakumbi!
tags: Inkcitho kwintengisoukulahlwa kwenqweloukuguqulwa kokusebenzaInkcitho yomthengidan wangeCommerceUyilo lwe-ecommerceimeyile ye-ecommerceizimvo zorhweboUkusebenza kwe-ecommerceIsibonelelo sokuphumaFacebookintengiso yexesha elizayoisiphoUkuba nesiphiwoyandisa inqwelo yokuthengakonyusa ixabiso leenqwelo zokuthengaYongeza inkcithoinstagramUkukhethwa kwegama elingundoqoUkuchitha kwi-Intanethiiphelile kwisitokhweukunciphisa ukushiya inqweloukunciphisa ukulahla inqwelo yokuthengathengaisikhoji sokuthengaubungqina boluntuuyilo lwevenkileWishlistilizwi lomlomo